Kulan albaabada u xiran yihiin oo caawa Villa Somalia uga socda Kheyre iyo Jawaari - Caasimada Online
Home Warar Kulan albaabada u xiran yihiin oo caawa Villa Somalia uga socda Kheyre...
Kulan albaabada u xiran yihiin oo caawa Villa Somalia uga socda Kheyre iyo Jawaari
Muqdisho (Caasimada Online) – Wararka naga soo gaaraya Xarunta Villa Somalia ayaa sheegaya in Caawa halkaasi uu kullan khaasa uga socdo Ra’isul wasaaraha Xukuumada Somalia Xasan Kheyre iyo Guddoomiyaha BFS Jawaari.
Kheyre iyo Jawaari ayaa si gaara uga wada hadlaaya warqad maanta kasoo baxday Xafiiskiisa oo lagu cadeeyay in 105 Xildhibaan ay aad u dhaliilsan yihiin Hanaanka awood qeybsiga Golaha Wasiirada.
Kullanka labada mas’uul ee Caawa ka socda Villa Somalia ayaa xal loogu raadinayaa warqada uu Jawaari usoo gudbiyay Ra’isul wasaare Kheyre.
Ra’isul wasaare Kheyre ayaa garwaaqsan in Jawaari uu kaalin weyn ku leeyahay xusul duubka loogu jiro hor istaaga Golaha Wasiirada, waxa uuna caawa juhdi ku bixinayaa in xal laga gaaro muranka ka taagan magacaabida Golaha Wasiirada.
Sidoo kale, kullanka labada mas’uul ayaa waxaa banaan joog ka ah Mas’uuliyiinta kale ee Villa Somalia ku sugan, waxa uuna qorshuhu yahay in Caawa xal laga gaaro muranka.
Si dhab ah looma ogaan karo waxa uu kusoo dhammaan doono kullanka waxaana la saadaalinayaa in kullankaani uusan lamid aheyn kuwii hore.